Madaxweyne Gaas ayaa xarriga ka jaray dhismaha cusub ee Jaamacadda Boosaaso faraceeda Garoowe (dhegayso/Sawiro) – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas ayaa xarriga ka jaray dhismaha cusub ee Jaamacadda Boosaaso faraceeda Garoowe (dhegayso/Sawiro)
Febraayo 25, 2018 12:36 g 0
Munaasabadd ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiiro, Xildhibaano, maamulka Jaamacadda Boosaaso, Ardayda Jaamacadda ,Ganacsato iyo Qurbe Joog ka kala timi daafaha Caalamka, kuwaas oo dalka ugu soo laabtay sidii ay u maal-gashan lahaayeen.
Guddoomiyaha Jaamacadda Boosaaso Faraceeda Garoowe Maxamed Cali Maslax ayaa waxaa uu ka warbixiyay marxaladaha kala duwan oo ay soo martay Jaamacadda tan iyo markii la’aas aasay .
Mudane Maslax ayaa intaa ku darray in Ardayda qallin jabisay ay yihiin dufcadii ugu horraysay ee ka baxda jaamacadda ,kuwaas oo tirradoodu ay tahay 258 qof .
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Abshir yuusuf ciise ayaa ku ammaanay maamulka Jaamacadda Boosaaso dhismaha quruxda badan oo ay u dhiseen sidii loogu horrumarin lahaa taclliinta sare Puntland .
Wasiirka ayaa kula dardaarmay ardayda Jaamacadda iyo kuwa ka qallin jabiyayba inay xoogga saaraan siddii ay u sii waddan lahaayeen waxbarashooda illaa ay heer sare ka gaaraan .
Madaxweynaha dawladda Puntland oo xarigga ka jaray dhismahaan cusub ayaa ku ammaanay maamulka Jaamacadda Boosaaso horumarka uu kusoo kordhiyey Puntland maadaama ay hirgaliyeen dhisme cusub oo shacabka Puntland ku taamayeen.
Madaxweynaha ayaa maamulka Jaamacadda ku boorriyey in ay dadaalka halkaas kasii waddaan oo ay la isla markaana ay xiriiro la yeeshaan Jaamacaddaha Caalamiga ah, sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu maamulka Bangiga ku boorriyey in ay ilaashadaan tayadda aqoonta ay dadka barayaan .
Ugu dambayn Madaxweynuhu waxa uu kula dar-daarmay dadka reer Puntland meel walba oo ay joogaan in ay ku dhiirradaan siddii ay sare ugu qaadi lahaayeen waxbarashada dalka si waddankana loo horumariyo dhallintun ay u yeeshaan aqoon ku filan illaa laga waayayo dalka qof jaahil ah.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku dadaali doonto siddii shaqooyin loogu raadin lahaa .
Dawladdiisa ayuu ku ammanay inay xoogga saartay mudadii ay xafiiska joogeen siddii saamiga haweenka kor loogu qaadi lahaa .
Madaxweynaha ayaa kadib markii uu kasoo baxay munaasabadda xarig jarka Jaamacadda waxaa uu shahaadooyin guddoosiiyay Xubno kamid ah ardayda qallin jabisay iyo maamulka Jaamacadda.